प्रस्तुत छ लेखक राजेन्द्र परियार र दिपकराज जोशी बिचको संवाद - Birgunj Sanjalप्रस्तुत छ लेखक राजेन्द्र परियार र दिपकराज जोशी बिचको संवाद - Birgunj Sanjalप्रस्तुत छ लेखक राजेन्द्र परियार र दिपकराज जोशी बिचको संवाद - Birgunj Sanjal
प्रस्तुत छ लेखक राजेन्द्र परियार र दिपकराज जोशी बिचको संवाद
२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ००:४१
वीरगन्ज । राहुल गुप्ता । तनहुँमा अर्थात् नेपाली कांग्रेसको बृतमा गोविन्दराज जोशीलाई नचिन्ने व्यक्ति बिरलै होलान् । नेपाली कांग्रेसका पुर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी बि.सं २००६ सालमा तनहुँ जिल्लाको रुपाकोट स्थित खाल्टेमा जन्मेका हुन्।जोशी गाउँका मुखियाका छोरा हुन् । जोशीका बुबा पदमराज जोशी तत्कालीन समयका गाँउ मुखिया थिए । महामानव बि.पि कोइरलाबाट प्रभाबित भएर पन्ध्र बर्षको कलिलो उमेरबाट नै जोशी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । २०२४ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष भएर काम गरेका जोशी २०२६ सालमा ९ जना सदस्य लिई तनहुँ कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिती गठन गरेको बताउछन् । कांग्रेसमा काम गर्दै जाँदा बि.सं २०३० सालमा तनहुँ कांग्रेसका सचिव तथा उपसभापति भएका थिए ।
लेखक ः तपाई बुबाको सट्टामा राजनीति गर्दा नाताबाद भएन र ?
दीपकः हुन त कोही नभएर सम्पुर्ण कुराहरु बन्द हुन्छन् चल्दैन भन्नु मुर्खता सिवाय केही होइन। म अभ्यासमा विश्वास राख्ने मान्छे हुँ।तर पनि जोशी विहिन तनहुँ कांग्रेस बिग्रिँदै गएको जनता सामु सर्वविदितै छ । तनहुँमा राजनिती गर्नेले के गरे के गरनन् पनि भनिरहनु पर्दैन होला । बिकास त परै जाओस् आफ्नै पार्टीलाई आगाडि पनि बनाउन सकेनन्।
जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो प्रश्नको जवाफ जनताबाट नै आओस् भन्ने अपेक्षा राख्छु।
१. अहिंसा ( शब्द, विचार र कार्यहरूको साथ कसैलाई चोट नपु